Drug overdose (ဆေးလွန်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Drug overdose (ဆေးလွန်ခြင်း)
ဖြစ်ပွားစေနိုင်ချေကို မြင့်စေသည့် အကြောင်းရင်းများ။
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » Health A-Z » Drug overdose (ဆေးလွန်ခြင်း)
ရေးသားသူ Dr. Kaung Thar ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Kaung Thar.
Drug overdose ဆိုတာဘာလဲ။
Drug overdose ဟာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ သို့မဟုတ် မတော်တဆ မူးယစ်ဆေး အသုံးလွန်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆေးပညာအရ ညွှန်းဆိုထားသော ပမာဏထက် ကျော်လွန်ပြီး အသုံးပြုပါက ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သို့သော် အချို့လူများတွင် ထိုပမာဏ မကျော်လွန်သော်လည်း သူတို့အတွက် အန္တာရာယ် ဖြစ်သော အခြေအနေသို့ရောက် သွားနိုင်ပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးကို ပမာဏ များစွာသုံးစွဲခြင်း ဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်မှ ထိုဆေးများကို လျှင်မြန်စွာ လိုက်မချေဖျက်နိုင်ပါက နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများ ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
လူတွေဟာ မူးယစ်ဆေး အသုံးလွန်သွားပါက ပုံစံ မျိုးစုံ တုံ့ပြန်ကြပါတယ်။ ကုသမှုက ဝေဒနာရှင်ပေါ်မူတည်ပါတယ်။
မူးယစ်ဆေး အသုံးလွန်သွားခြင်း ဟာ ဘယ်လောက်ထိ အဖြစ်များသလဲ။
မူးယစ်ဆေး အသုံးလွန်သွားခြင်းဟာ အလွန်အဖြစ်များပါတယ်။ ကလေး၊ ဆယ်ကျော်သက်နှင့် လူငယ်တွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
မူးယစ်ဆေး အသုံးလွန်သွားခြင်း ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
မူးယစ်ဆေး အသုံးလွန်သွားခြင်း ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
-မျက်လုံး သားငယ်အိမ် ကျယ်ခြင်း
-အသက်ရှူ ခက်ခြင်း၊ အသက်ရှူရပ်သွားခြင်း
-အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပိတ်ကာ အသံမြည်ခြင်း
-နှုတ်ခမ်းနှင့် လက်ချောင်းများ ပြာနှမ်းခြင်း
-အပြုအမူများ မှာ ရန်လိုခြင်း
အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အထဲမှာမပါဝင်တဲ့ အခြားသောလက္ခဏာတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ ထိုလက္ခဏာများ အကုန်ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်ပါမယ်။တကယ်လို့ကိုယ့်ဆီမှာ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုများရှိနေမလားဆိုပြီး စိုးရိမ်နေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ သွားရောက်ပြသသင့်ပါသလဲ။
(ယေဘူယျအသိပေးချက် – ယခုအပိုင်းရဲ့အစပိုင်းမှာထည့်သွင်းပါ
သင့်မှာ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်တွေထဲက တစ်ခုခုရှိခဲ့ရင် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။
(တကယ်လို့ တခြားဘာအချက်အလက်မှမရှိဘူးဆိုရင် ဒီအောက်ကစာသားကို ထည့်သွင်းပါ)
သင့်ဆီမှာ အထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုခုများရှိနေမယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် မေးခွန်းတစ်ခုခုရှိနေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ လူတိုင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တုံ့ပြန်မှုဟာ မတူညီနိုင်ပါဘူး။ သင့်အခြေအနေအတွက် ဘာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကို သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ဘာတွေက မူးယစ်ဆေး အသုံးလွန်သွားခြင်း ဖြစ်ပွားစေသလဲ။
Drug overdose ဟာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ သို့မဟုတ် မတော်တဆ မူးယစ်ဆေး အသုံးလွန်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ ကလေး၊ ဆယ်ကျော်သက်နှင့် လူငယ်တွေမှာ စိတ်ပုံမှန်မဟုတ်သော ရောဂါရှိပါက မတော်တဆ မူးယစ်ဆေး အသုံးလွန်တတ်ပါတယ်။
လူကြီးများက လည်းယောင်မှားပြီး သောက်သုံးရမည့် ပမာဏထက် ကျော်လွန်စွာ သုံးလိုက်မိခြင်း လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ များများသုံးလိုခြင်း၊ မိမိကိုယ်မိမိ သေကြောင်းကြံခြင်း တို့ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
စူးစမ်းလိုစိတ်ဖြင့် ကလေးငယ်များ မှ သိလိုစိတ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း မတော်တဆ မြိုချလိုက်မိခြင်း ကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အသက် ၅ နှစ်အောက် ကလေးငယ်များဟာ တွေးရာပစ္စည်းများကို ပါးစပ်ထဲ ထည့်လေ့ရှိကြသည်။ ထို့ပြင် ကလေးအချင်းချင်း ဝေငှပေးဆော့ တတ်သည်။ လူကြီးများက ဆေးများကို ကလေးများ မကိုင်တွယ်နိုင်အောင် ထိန်းသိမ်းမှုမရှိသော ကြောင့်ဖြစ်တတ်သည်။
ထို့ကြောင့် ကလေးငယ်များ အတူတူ ဆော့ကစားရင်း ကလေးတစ်ယောက်တွင် မူးယစ်ဆေး အသုံးလွန်သွားခြင်း ဖြစ်ပါက ဘေးရှိ အခြားကလေးများလည်း ဆေးများမြိုချထားနိုင်ကြောင်း သတိပြုသင့် ပါတယ်။
လူငယ်များဟာ မိမိကိုယ်မိမိ သေကြောင်းကြံခြင်းပြုလုပ်ရန် မူယစ်ဆေးကို သုံးတတ်ကြပါတယ်။ ထိုသူများတွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါ/အခြေအနေ တစ်ခုခု ရှိတတ်ပါတယ်။
ဘယ်အရာတွေက မိမိကိုယ်မိမိ သေကြောင်းကြံခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေပါသလဲ။
မိမိကိုယ်မိမိ သေကြောင်းကြံခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
-စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရ ဆေးသုံးလိုခြင်း
-အရက်ကဲ့သို့ အရာများပါ စွဲမြဲသုံးတတ်သော အလေ့ရှိခြင်း
-တစ်ခါတည်း ပမာဏ အများကြီး သုံးခြင်း
-ဆေးစွဲမှု ကုသခြင်း ရပ်လိုက်ခြင်း
-ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆေးပမာဏကို တိုးသွားခြင်း
-တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်ပါက အရေးပေါ်ကုသမှု ခံယူရန် နှောင့်နှေးခြင်း
-မူးယစ်ဆေးကို အကြောမှ တစ်ဆင့် သုံးခြင်း
-မကြာသေးမီကမှ ထောင်မှ လွတ်လာခြင်း
-အရင်ကလည်း မိမိကိုယ်မိမိ သေကြောင်းကြံဖူးခြင်း
-ခန္ဓာကိုယ် က ဆေးဒါဏ်ကို မခံနိုင်ခြင်း
အထက်ပါဖြစ်ပွားနိုင်ချေများ မရှိခြင်းကြောင့် သင့်မှာ မူးယစ်ဆေး အသုံးလွန်သွားခြင်း မဖြစ်ဘူးလို့ ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဒီအချက်လက်များဟာ မှီငြမ်းကြည့်ရှုဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
မူးယစ်ဆေး အသုံးလွန်သွားခြင်း ဟုတ်မဟုတ်ကို ဘယ်လိုအဖြေရှာအတည်ပြုသလဲ။
ဆရာဝန်မှ ရောဂါ ရာဇ၀င်မေးခြင်းနှင့် စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခြင်း ဖြင့် အစပြုပါတယ်။ ထိခိုက်သွားသော ခန္ဓကိုယ်အတွင်းအစိတ်အပိုင်းပေါ် မူတည်ကာ ဆရာဝန်မှ ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ မိသားစုဝင်များနဲ့ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများ ထံမှ သုံးလိုက်တဲ့ဆေးအမည်၊ ပမာဏ၊ ဖြစ်သွားတဲ့ အချိန် စတဲ့ သတင်းအချက်အလက် စုဆောင်းနိုင်ပါတယ်။
သုံးလိုက်တဲ့ ဆေးအမည်သိပါက သွေးထဲတွင် ဆေးပမာဏကို ရှာတိုင်းနိုင်ပါတယ်။
မူးယစ်ဆေး အသုံးလွန်သွားခြင်း ကို ဘယ်လိုကုသလဲ။
သုံးလိုက်တဲ့ ဆေးအပေါ်မူတည်ပါတယ်။ သုံးလိုက်တဲ့ဆေးအမည်၊ ပမာဏ၊ ဖြစ်သွားတဲ့ အချိန် စတဲ့ သတင်းအချက်အလက်များက အထောက်အကူပြုပါတယ်
အစာအိမ်ဆေးခြင်းဖြင့် သွေးထဲမရောက်သေးသော ဆေးများကို ဖယ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။
ပြုလုပ်ထားသော မီးသွေးမှုန့်ကို အစာအိမ်တွင်းထည့်ကာ ဆေးများကို သွေးမှ စုပ်ယူမှုနည်းအောင် ပြုလုပ်ပြီး ၀မ်းမှတစ်ဆင့် စွန့်ပစ်စေပါတယ်။ ၀မ်းမှ လျင်မြန်စွာ စွန့်ထုတ်နိုင်ရန် cathartic ကို မီးသွေးမှုန့်နှင့် ရော၍ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရန်လိုနေသော ဝေဒနာရှင်များဟာ အနည်းငယ် ချုပ်နှောင်ထားခြင်း၊ အိပ်ဆေးပေးခြင်း တို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်များဟာ ဝေဒနာရှင်နှင့် သူ့မိသားစုအတွက် ဆိုးရွားတဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ ဆရာဝန်များက လိုအပ်မှသာ ချုပ်နှောင်ခြင်းကို ပြုလုပ်ကြပါတယ်။
ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများဟာ လိုအပ်သော ကုသမှုမျိုးကို လိုအပ်၍ ပြုလုပ်နေသည်ဟု သိထားရပါမယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဝေဒနာရှင်သည် အသက်ရှူပုံမှန်မဟုတ်တော့ပါက နှာခေါင်းပိုက်ထည့်ခြင်း စသည်တို့ကိုလုပ်ရနိုင်ပါတယ်။
ထို့ပြင် သုံးလိုက်သော မူးယစ်ဆေးကို တိုက်ထုတ်ရန် လိုအပ်သော ဖြေဆေးများသွင်းရနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့ဖြင့် ဖြစ်နေသော ရောဂါလက္ခဏာများကို ပြန်ကောင်းစေနိုင်ပြီး နောက်ထပ်ထပ်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဖြေဆေးပေးရန် လိုမလိုကို ဆရာဝန်မှ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက မူးယစ်ဆေး အသုံးလွန်သွားခြင်း ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် မူးယစ်ဆေး အသုံးလွန်သွားခြင်း ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ပထမဆုံး ဆရာဝန်နှင့် သွားပြသင့်ပါတယ်။
အချို့သော မူးယစ်ဆေး အသုံးလွန်သွားခြင်းများ အတွက် အဆိပ်အတောက် ထိန်းချုပ်ရေးဌာနမှ ထောက်ခံထားသည့်
အိမ်သုံးကုထုံးများရှိပါတယ်။ ဖြစ်ဖြစ်ပြီးချင်း ipecac အရည် သို့မဟုတ် အခြားသော ကုထုံးများကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ မလုပ်သင့်သေးပါ။
အိမ်တွင် ကလေးသူငယ်ရှိပါက အဆိပ်အတောက် ထိန်းချုပ်ရေးဌာန၏ ဖုန်းနံပါတ်ကို ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
မိမိကိုယ်မိမိ သေကြောင်းကြံရန် ကြိုစားသူများ ဟာ ကုသမှုပြီးပါက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုသမှုလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုသူများတွင် ဆေးလွန်ခြင်းဟာ အသေးစားဖြစ်သော်လည်း ဆေးရုံ၏ အရေးပေါ်ဌာနသို့ ခေါ်သွားသင့်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ထပ်မံ သေကြောင်းကြံစည်နိုင်သော ကြောင့် အမြဲ စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
မူးယစ်ဆေး သုံးသည်ဟု သိထားသော သို့မဟုတ် သံသယရှိသော သူများ၏ မိသားစုဝင်များ ဟာ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးဌာန မှ ထောက်ခံသော ကုသနည်းများကို သိထားသင့်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးများထဲတွင် ဘိန်းအနွယ်ဝင် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ၊ လမ်းဘေးကွမ်းယာ စပ်ဆေးများ ပါဝင်သည်ကို သိထားရပါမယ်။ ဆေးလွန်သွားပါက အသက်ရှူနှုန်း၊ နှလုံးခုန်နှုန်း များပုံမှန်ခြင်း၊ သတိလစ်ခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးသုံးသူများအတွက် အသင့်သုံး၊ evzio (naloxone ဖြေဆေး) ပါပြီးသား ဆေးထိုးအပ်များကို အိတ်ကပ်ထဲတွင် ဆောင်ထားနိုင်ပါတယ်။ ထိုဆေးဟာ တစ်ချက်ထိုးလိုက်ရုံနှင့် မိနစ်ပိုင်းအတွင်း အစွမ်းပြသော်လည်း ဆရာဝန်နှင့် သွားပြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အကယ်၍သင့်မှာ မေးခွန်းတွေရှိမယ်ဆိုရင် သင့်အတွက်သင့်တော်တဲ့ အဖြေရှာဖွေနိုင်ဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Drug Overdose. https://drugabuse.com/library/drug-overdose/. Accessed October 23, 2017.
Drug Overdose. https://www.webmd.com/mental-health/addiction/drug-overdose#1. Accessed October 23, 2017.
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ မတျ 16, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း မတျ 16, 2018
မိန်းမကိုယ်သန့်စင်ဆေးရည် သုံးခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုး ၉ ချက်
မိန်းမကိုယ်သန့်စင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လုပ်သင့်၊ မလုပ်သင့်အချက်များ